UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka banaan: KAALIYAHA LUUQADDA EE GOOBTA | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka banaan: KAALIYAHA LUUQADDA EE GOOBTA
LAMBARKA OGEYSIISKA BOOSKA BANNAAN: UNSOM/PAMG/027/2018
Booskan waxaa la maalgelinayaa muddo hal sano oo hordhac ah kaliya, muddo kordhintana waxaa ay ku xirnaan doontaa sida loo ansixiyo miisaaniyadda. Booskan waa mid maxalli ah. Shakhsiga booskan codsanaya ayaa mas’uul ka ah dhammaan kharashka ka bixi doono si uu ula wareego booskan. Dhammaan dadka daneynaya shaqadan waxaa si weyn loogu boorrinayaa in ay codsiyadooda ku soo gudbiyaan ka hor inta aan la gaarin taarikhda kama dambeysta ah ee kor ku xusan.
Booskani waxaa uu ka bannaan yahay Dhusamareeb. Hase ahaatee, shakhsiga la soo qaadan doono waxaa uu saldhiggiisu noqon doona Muqdisho si ku meel-gaar ah ilaa iyo markii ay QM xarun ku yeelato Dhusamareeb, markaas ayaa xil-hayaha loo wareejin doona Dhusamareeb.
Booskan waa boos ka bannaan Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) Dhusamareeb. Xil-hayaha waxaa uu hoos imaan doona Sarkaalka Sare/Sarkaalka Arrimaha Siyaasadda.
In uu si sax ah oo hufan u fidiyo turjumaad mid toos ah ama mid is daba joog ah (markuu hadlaha aamuso) ee luuqadaha Af-Soomaaliga iyo Ingiriiska. Tani waxaa ka mid noqon karaa in uu turjumaad ka fidiyo shirar heer sare ah, munaasabadaha warbaahinta iyo kulamo.
In uu turjumaad af ah oo waadax ah isla markana kooban u kala sameeyo mas’uuliyiinta hay’adda iyo bulshada maxalliga ah, iyada oo taasi lagu taageerayo hawlgallada iyo hawlaha guud ee hay’adda.
In uu kala kaashado dhiggiisa ka tirsan waaxyada kale arrimaha la xiriira diyaarinta jadwalka iyo qorshayaasha maamul.
In uu mas’uuliyiinta ka caawiyo diyaarinta qabyo qoraallo, qoraallo kooban iyo macluumaad kooban.
Wada-Shaqayn:In uu si wadajir ah ula shaqeeyo shaqaalaha kale si loo gaaro yoolka hay’adda; In uu afkaarta uruuriyo asaga oo si dhab ah u qiimeynayo fikradaha iyo khibradaha dadka kale; in uu yahay qof diyaar u ah in uu dadka kale wax ka barto; In uu danaha kooxda uu ka horumariyo danaha shakhsi; In uu taageero uuna ku dhaqmo si waafaqsan go’aanka kama dambeyska ah ee kooxda, xata haddii go’aannadaas aysan is waafaqsaneyn go’aankiisa; in uu amaanta guulaha la gaaray uu la qaybsado kooxda uuna aqbalo in uu qayb mas’uul ka yahay dhammaan gaabiisyada kooxda.
Waxbarasho: Shahaaddada dugsiga sare ayaa loo baahan yahay.
Khibrad: Ugu yaraan shan (05) oo uu qofka ka haysta bixinta adeegyada turjumidda/fasirka.
Luuqad: Booskan waxaa loo baahan yahay qof fasIIx ku ah luuqadaha Ingiriiska iyo Af-Soomaaliga. Aqoonta luuqadaha kale ee Qaramada Midoobay waa mid wax tar leh.
Xirfadahakale: Xirfad heer sare ah dhinaca gaari wadista ayaa loogu baahan yahay booska. Xil-hayaha waa in uu leeyahay liisan sax ah oodarawalnimada oo ay bixisay hay’ad lagu kalsoonaan karo. Xil-yahaya waa in uu awoodo in uu shaqeeyo kaddib wakhtiyada caadiga ah ee shaqada iyo fasaxa dhammaadka usbuuca, markii loo baahdo.
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoosemarkii la joogo taariikhda kama dambeysta ah ama ka hor.Foomka P11 waxaad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee 26, Juun 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CV) lama aqbali doono.
Fadlan ku lifaaq nuqulka foomka P11, Shahaaddada, Baasaboor iyo/ama Teesaraha Aqoonsiga. Kuwani waa loo baahan yahay, waxaa ay qayb ka yihiin codsigaaga waxaana loogu talagalay in lagu qiimeeyo in aad shaqada u qalantid. Fadlan la soco in Shahaadooyinka Waaxda Dembi Baarista (CID-da) iyo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda (NISA)loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.
Previous articleWarbixin: Wajiga dhabta ah ee Dagaalka Tukaraq
Next articleUNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) launches Job for: FIELD LANGUAGE ASSISTANT